Topnews:-Gudoomiye Jawaari oo Jigjiga tegay - Garguurte oo dhabanada heysta iyo biloowgii loolanka?
18 Febraury 2013 Waagacusub.com- Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia Mohamed Osman Jawaari ayaa safarkiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka qabtay wuxuu ku tegay Magaaladda Addis Ababa isagoo uga sii gudbay Magaaladda Jigjiga ee Ismaamulka Somalida. Waa markii ugu horeeysay taariikhda ee Masuul ka socda Dowladda Somalia tago jigjiga oo lagu tilmaami karo soon ka caagan.
Safarka Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa shaki weyn geliyay Madaxweynaha Somalia Hassan Mohamud Alasow maxaa yeelay wuxuu la kulmay dhigiisa dalka Ethiopia,Raísulwasaaraha Ethiopia,Wasiirka Arrimaha dibadda ,duqa Magaaladda Addis Ababa iyo Madaxda Kililka shanaad ee Somalida.
Gudoomiye Jawaari intii uu Muqdisho ka bixin isagoo ah Ku sime Madaxweyne ah ayuu Dikreeto ku magacaabay Maamulka Bay taas oo khilaaf ka dhashay ,sababay in Madaxweyne Garguurte ninkii xilka qaadista uu Jawaari ku sameeyay dib u magacaabo.
Mr Jawaari wuxuu Muqdisho kulama kula yeeshay qeybaha bulshada sida Haweenka,ururada Shaqaalaha iyo Ardayda Jaamacadaha.
Dadka Siyaasadda Gorfeeyo waxay tilmaamayaan in dalka Somalia Madaxweyne labaad yeeshay maxaa yeelay xitaa Gudoomiye Jawaari wuxuu dhex degan yahay gudaha Madaxtooyada halka uu Gudoomiyahii hore Shariif Hassan deganaa guri ku yaal meel ka baxsan Villa Somalia.
Shakiga ugu weyn wuxuu ka jiraa sababta Dowladda Ethiopia ku aqbashay in Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia booqdo Jigjiga?
in Madaxda Somalia tagaan Jigjiga waxay Dowladda Ethiopia u aragtaa Qatar weyn iyo inqilaab siyaasadeed laakiin waxaa laga yaabaa in ujeedo qarsoon laga leeyahay.
Arrimaha la isweydiin karo waxay tahay Gudoomiye Jawaari shaqada uu qabanayo sharciyan ma leeyahay? maxayse ka dhigan tahay in Gudoonka Golaha Wakiiladda Somalia safarkiisii ugu horeeyay ku tago Addis iyo Jigjiga,Madaxweynaha Safaro badan ku tago dibadda halka Ra''isulwasaraha Somalia uu dalka dibada uga bixin tan iyo markii la magacaabay oo shan bil laga joogo.
Xeeldheerayaasha waxay qabaan in ugu badnaan halsano is qarin doono Gudoomiye Jawaari balse kadib uu seeftiisa la bixi doono.
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Garguurte oo shaki badan ka qabo qorshaha uu wado Gudoomiye Jawaari wuxuu heystaa dhabanada,waxaana ka soo hartay SHIB.